China Polyquaternium-11 ifektri nabakhiqizi | Y&R
isebenza njenge-ejenti yokulungisa, yokwenza ifilimu kanye ne-conditioning. Inikeza ukuthambisa okuhle kakhulu ezinweleni ezimanzi kanye nokukanywa kalula nokuncibilika ezinweleni ezomile. Yakha amafilimu acacile, angena-tacky, aqhubekayo futhi isiza ukwakha umzimba ezinweleni ngenkathi ishiya ilawuleka. Ithuthukisa ukuzwa kwesikhumba, inikeza ubushelelezi ngesikhathi sokufaka isicelo kanye nokulungiswa kwesikhumba. I-Polyquaternium-11 iphakanyisiwe ukuthi isetshenziswe kuma-mousses, amajeli, izifutho zesitayela , izitayela ezintsha, izinto zokuthambisa zokushiya, ukunakekelwa komzimba, izimonyo zombala, nezinhlelo zokusebenza zokunakekela ubuso.
Igama Lomkhiqizo: I-Polyquaternium-11
Ikhodi Yomkhiqizo: I-YNR-PQ11
INCI Igama: I-Polyquaternium-11
Inombolo ye-CAS: 53633-54-8
I-Polyquaternium-11usawoti we-polymeric quaternary ammonium usawoti owakhiwa ukusabela kwe-diethyl sulfate kanye ne-copolymer ye-vinyl pyrrolidone ne-dimethyl aminoethylmethacrylate. Isesigabeni samakhemikhali aziwa ngokuthi ama-quaternary ammonium compounds (ngokuvamile abizwa ngokuthi “iQuat”).I-Polyquaternium-11 iyisisombululo se-aqueous se-viscous ephezulu,Ixubene namanzi ne-ethanol,Iphunga eliyisici kancane.I-Polyquaternium-11 iyifu, utshani -ifilimu enemibala yangaphambili kanye ne-anti-static ejenti.Isebenza njenge-ejenti yokubeka isimo kanye nefilimu-yangaphambili, insiza yesitayela.
Ukubukeka Uketshezi lwe-viscous olulufifi olucacile kuya kancane
Okuqukethwe Okuqinile 19~21%
Inani le-pH (njengoba linjalo) 5.0~7.0
I-N-Vinylpyrrolidone 0.1% ubuningi.
I-Viscosity(#3,@6rpm,25℃) 20,000-60,000 cps
Umbala(APHA) 120 ubuningi.
Izicelo:I-Polyquaternium-11 ihlinzeka ngezinzuzo ezikhanyayo, ezinqamulayo kanye ne-de-frizzing kuma-conditioner wezinwele nama-shampoos ngokumboza izinwele ngefilimu ecacile enezela ivolumu ebonakalayo kanye nezinzwa.
I-Polyquaternium-11 iyinhlanganisela ye-quaternary ammonium eyenza amafilimu aguquguqukayo anezinzuzo ezilula zokumisa ekuhlanjululeni nasekufakeni izinhlelo zokusebenza zesitayela.Sebenzisa njenge-conditioning ejenti kuma-shampoos kanye nokhilimu noma ama-rinse conditioners acacile. Inikeza ukuthungatha okusheshayo ngenkathi yengeza ivolumu nomzimba ezinweleni. Yenza izinwele zibe lula ukuhlanganisa.Isebenza kahle kakhulu emikhiqizweni yesitayela sezinwele, kufaka phakathi isifutho kuma-conditioner nama-detanglers. Kuhle kakhulu ukusetshenziswa ngokuwomisa okushaywayo kanye neziqondiso lapho kunganikeza ukuvikeleka okushisayo kwezinwele.I-Polyquaternium-11 ingasetshenziswa emikhiqizweni ye-skincare futhi ukuze isikhumba sizizwe ngcono. I-Polyquaternium-11 isebenza kahle emikhiqizweni yokushefa, okhilimu besikhumba nezinto zokugcoba, insipho ewuketshezi nezinsimbi zensipho.
I-Polyquaternium-11 isetshenziswa ekunakekelweni kwezinwele njengama-mousses, ama-gel, izifutho zepompo nama-spritzes. Isebenza njenge-ejenti yokufaka isimo kanye nomenzi wefilimu. Inikeza izici ezinjengokuqina, ukukhanya nokulawula. Isetshenziswa ekunakekelweni kwezinwele njengezigcobo, ama-mousses, amajeli, izifutho, ama-shampoos, ekunakekeleni isikhumba njengensipho, igwebu lokushefa kanye nezigcobo zomzimba. Isebenza njenge-conditioner nesisizi sesitayela. I-Polyquaternium-11 ifaka ukusabalala, ukushaja kwe-electrostatic ukuvimbela kanye nezakhiwo zokugcoba. Inikeza izinzuzo ezihlanganisa i-lather ezinzile, ukuqina, ukuhlangana okumanzi, ukuthambile, ukubamba, ukuzwa okubushelelezi nokuzwakala kwesikhumba esisilika.
I-Polyquarternium-11 uma isetshenziswa ekhiqizweni elinegwebu njenge-shampoo noma ijeli yokugeza izothuthukisa amazinga egwebu. I-Polyquaternium-11 ihambisana nama-non-ionic, i-anionic kanye nama-amphoteric surfactants kanye nezilungisi ze-rheology. I-Polyquaternium-11 inhle kakhulu ehlanganiswe ne-carbomer ukukhiqiza ama-gel abushelelezi futhi asetshenziswe kalula.I-Polyquaternium-11 ingathuthukisa ukuzinza kwe-surfactant, ukhilimu kanye ne-lotion based formulations.
I-Polyquaternium-11 ihlinzekwa njengoketshezi lwe-viscous, nakuba itholakala embizeni ukuze isetshenziswe kalula njengoba uketshezi luwugqinsi kakhulu. Ukufudumala kancane kungasiza ngokusebenziseka ekwakhekeni.I-Polyquarternium-11 incibilika kalula emanzini futhi ngaleyo ndlela kulula kakhulu ukuncibilika esigabeni samanzi sokubunjwa. Uma sisetshenziswa ekwakhiweni okususelwe ku-surfactant sicebisa ukwengeza i-Polyquaternium-11 ngaphambi kwama-surfactants ukuze kube lula ukuhlakazeka.Lapho uhlanganisa izinhlelo zokusebenza ezishisayo, engeza esigabeni samanzi bese uhlakaza. I-Polyquatenrium-11 iyakwazi ukumelana nokushisa.
Olandelayo: I-Hydrolyzed Keratin
Imboni yaseChina Polyquaternium 11